Global Voices teny Malagasy » Fampiasàna ny Grammarly ho an’ny GV? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Oktobra 2018 10:15 GMT 1	 · Mpanoratra Mohamed ElGohary Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Mediam-bahoaka, vondrom-piarahamonina, Blaogim-Piarahamonina GV, efitrano famoahambaovao
Akory aby! Ato amin'ny GV, ny teny Anglisy no tenin'ny ampahany lehibe amin'ny votoatintsika sy ny fifandraisantsika. Raha toa ka ao amin'ny Lingua no ahitàna ny ampahany lehibe indrindra amin'ny vondrompiarahamonina, amin'ny ankapobeny dia miainga amin'ny teny anglisy no hanaovantsika dikateny, ary amin'ny teny Anglisy ihany koa no hifampiresahantsika. Raha ny fijeriko manokana, arakaraka ny mahatsara ny Anglisy ampiharintsika rehetra no mahatsara ireo dikateny azo, ankoatra ny fifandraisantsika.
Araka ny mety ho efa fantatrao, na dia mahazo aina aza aho miresaka amin'ny teny Anglisy, tsy io no tenin-drazako. Mbola manao fahadisoana foana aho. Mpampiankin-teny diso eto, tsipelina diso etsy. Mety mitovy amin'izany ihany koa ireo teratany fa izany hoe maivana kokoa. Satria tokoa isika rehetra dia samy olombelona avokoa, manao hadisoana.
Misy, mazava ho azy, ireo mpanaramaso ny tsipelina Anglisy amin'ny endrika sy sehatra an-tapitrisany, saingy nitoetra tamiko foana ilay fahatsapana fa tsy tena mpanoratra matanjaka aho noho ny fitsipi-pitenenana. Ary tsy mbola tena nahita fitaovana hahafahako manarina ny fitsipi-pitenenana sy ny fitsipi-panoratana aho, mandra-pahitako ny Grammarly , izay nanandramako ireo dika maimaimpoana sy andoavam-bola.
Atolotra karazana teny Anglisy efatra ianao rehefa misoratra anarana: Amerikana, Britanika, Kanadiana sy Aostraliana. Rehefa avy nisafidy iray amin'izy ireo, sy nanohy ny fanoratanao ianao, ho voasoritra mena ireo olana goavana izay mila amboarinao. Miovaova ireo olana goavana ireo, mety ho faingo diso toerana, fiverimberenana, tsipelina diso sns. Tena ilaina ilay izy amiko rehefa mikarakara ireo Fangatahana Fanontàna  aho, rehefa manoratra lahatsoratra ao amin'ny GV, ny mailako, ny asa soratro amin'ny ankapobeny.
Tsy mora ilay dika andoavam-bola! Saingy mampiseho olana sarotra ara-pitsipi-pitenenana maro izy, eo ihany koa ny fahafahany mampiseho zavatra toy ny hala-tahaka. Ao amin'ilay endrika ho an'ny solosaina, afaka manamboatra ny asa soratrao mba hifanaraka amin'ny tanjonao ianao; ankapobeny, raharaham-barotra, famelabelarana, sns, izay hiasa be ho an'ny toniandahatsoratsika sy ireo mpanampy ny toniandahatsoratra. Afaka ampiasana ao amin'ny Google Docs mihitsy aza izany ankehitriny! Maniry ny hiresaka momba ny fahafahana mampiasa azy miaraka amin'ireo toniandahatsoratry ny sehatra famoaham-baovao sy ny ekipan'ireo mpanampy toniandahatsoratra ato amintsika aho.
Mieritreritra aho fa raha mba nanomboka nampiditra ilay Grammarly maimaimpoana fara-faharatsiny ireo mpandray anjara ato amin'ny GV, mety hanana asa soratra tsaratsara kokoa isika rehetra, ary tsy handany betsaka ny fotoan'ireo toniandahatsoratra sy ireo mpanampy azy ao amin'ny sehatra famoahan-dahatsoratra, izay mitondra mankany aminà traikefa tsaratsara kokoa ho an'ny GV! Fantatro fa efa mpanoratra tsaratsara kokoa aho ankehitriny taorian'ireo taona maro nampiasako azy io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/10/126759/
 Fangatahana Fanontàna: https://community.globalvoices.org/guide/lingua-guides/global-voices-edit-request/